PSJTV | सुविन भट्टराईलाई प्रश्न : आफ्नो पहिलो प्रेम कसरी सम्झनुहुन्छ ?
प्रेम पहिलो, द्वितीय वा तृतीय भनेर कसरी सिलसिला मिलाएर भनौं खै? जन्मिएपश्चात् जब ममा चेतना भन्ने चिज आयो, तब आफूलाई आमाको आँचल र बाको काँधमा पाएँ। कोही कसैले पनि बाआमालाई भन्दा बढी प्रेम कसलाई गर्ला र’ झगडा गरे पनि, मिले पनि हरदिन दाइ र दिदीको साथमा अधिकांश बाल्यकाल र जवानी बित्यो। म उनीहरूलाई पनि आदिकालदेखि प्रेम गर्छु।
जिन्दगी नाउँको यात्रामा मन पराएको र मन पराईका अथवा जेलाई प्रेम भन्थें, ती कतिपय बीचबीचमा छाडिँदै गए। साय त्यो प्रेम थिएन। श्रीमती जो अहिले छिन्।
जसलाई मन पराएरै, प्रेम गरेरै विवाह गरें। उनलाई खुब प्रेम गर्छु। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दर्जा आफ्नो ठाउँमा छ।
त्यसो त सबैभन्दा पछिल्लो चोटि जन्मिएको छोराको नाम पनि बाआमा तथा श्रीमतीको भन्दा कम माया लाग्दैन। पहिलो प्रेमलाई कसरी सम्झन्छु, योभन्दा महत्वपूर्ण आँखा खोदा कसलाई खोज्छु् र आँखा बन्द गर्दा कसलाई देख्छुले धेरै प्रभाव पार्दाेरैछ। उनको यो विचार आजको साप्ताहिकमा छ।